Kraken Spiced Nhema Rum Matte Grey Ceramic Yakatemerwa Edition 0,7l - Wevino.store
Yakatsemurwa Yakasviba Nhema Rum Matte Grey Ceramic Yakatemerwa Edition 0,7l
Kraken Yakasanganiswa Nhema Rum Matte Grey Ceramic Yakatemerwa Edhisheni
Iri gore risingapfuure ceramic bhodhoro reKraken Rum rine kirimu-ine ruvara zvine hwakakomberedzwa kuratidza matende eiyo octopus. Magadzirirwo akaitwa nemavara edombo re coral matombo uye anoratidza matema matema anomiririra inki yechisikwa chegungwa chisikwa.
Vese vateveri vanofanirwa kuziva kuti Iyo Kraken iyi inoshamisa rum. Kana iwe usati uine iyo yekuravira iyo ikozvino, iwe unofanirwa kuraira imwe yemabhotoro echitendero nekukurumidza sezvinobvira uye tanga ku ravira nevadikani vako. Iwe uchada zvinonhuwira zvinonhuwira zveane simba Spice Rum!
Iko kunhuhwirira muThe Kraken kunosiyana kubva pane sinamoni uye doro kune makerubhi uye zvinonhuwira. Vanovanda muink-dema rum, uye vanomirira kutaridzika kwavo, iyo inonyanya kupa zvinonhuwira Ginger Beer yekurumbidza kusingaperi.